Umdanso wama-tulips, imfihlakalo yokubulawa kukaNatalia Etxano | Izincwadi Zamanje
Umdanso wama-tulips Kuyamjabulisa umbhali waseSpain u-Ibon Martín Álvarez. Le ncwadi yashicilelwa ngo-2019 futhi ngesikhathi esifushane yayisezindaweni zokuqala zokuthengisa, okwakhulisa kakhulu umsebenzi wombhali. Namuhla, i-Ibon yamukelwa njengomunye wabakhiseli abahamba phambili balolu hlobo, futhi seyaziwa ngokuthi: “inkosi yaseBasque yokusolisa”.
Imfihlakalo iqala ngokubulawa kukaNatalia Etxano, intatheli ephumelelayo evela eGernika. Leli cala lidluliselwa ngokusakazwa bukhoma ngokusebenzisa inethiwekhi yezenhlalo edumile futhi yafinyelela izinkulungwane zemibono, okuyi kushaqise wonke umphakathi. Umbhali wenze indaba ephelele impela; incazelo yakhe yesimo sezulu ihlanzekile, kanye nemininingwane eqondile yophenyo lwamaphoyisa. Ngokwabo, abalingiswa bahlukahlukene futhi bafeze kahle, benamadrama alukiwe.
1 Isifinyezo seThe Dance of the Tulips
2 Ukuhlaziywa komdanso wama-tulips
2.5 Imfihlakalo engapheli
4 Olunye ulwazi mayelana nomlobi: Ibon Martín Álvarez
4.1 Uhamba ngezwe laseBasque
4.2 Amanoveli okuqala
Isifinyezo se- Umdanso wama-tulips
Kwakuwusuku olujwayelekile isitimela sikalayini i-Urdaibai sasisebenza ngokujwayelekile, nini, Ngokushesha, umshayeli wabona okuthile okukude ngqo emathrekhi. Lapho esondela, wakwazi ukubona kahle ukuthi kwakumayelana nani: kwakungukuthi owesifazane oboshwe esihlalweni, ephethe i-tulip ebomvu ezandleni zakhe. Le ndoda yazama masisha ukumisa umshini wokuxhuma, kepha yazi ngaphakathi ekujuleni ukuthi akunakwenzeka ukukwenza ngesikhathi.
Ngaphambi kokuthi kugijinywe, umshayeli ukwazile ukubona lo wesifazane ... kwakumayelana nomkakhe, uNatalia Etxano, intatheli yomsakazo eyaziwayo yaseGernika. Ingqondo egulayo ebihlela ubugebengu obuhlasimulisa umzimba ishiye umakhalekhukhwini endaweni yesigameko, lapho le nhlekelele ibisakazwa khona bukhoma kuFacebook. Izinkulungwane zezibukeli zikwazile ukubona leso sehlakalo esingenabuntu.
Ngenxa yale micimbi, iSpecial Impact Homicide Unit iyakhiwa, ukuqala uphenyo ngaleli cala. Leli qembu lakhiwe ngumhloli omncane U-Ane Cesteno nomlingani wakhe u-Aitor Goneaga, kanye nabenzeli UJulia Lizardi, uTxema Martínez kanye nodokotela wezengqondo uSilvia.
Lapho uqala imibuzo, imininingwane ekhethekile yobugebengu iyadalulwa, futhi phakathi kwazo, okusobala kakhulu nokugqamile: i-tulip ebomvu futhi kukhanya ezandleni zesisulu, into enzima ukuyithola ekwindla. Lokhu nezinye izinto kusikisela ukuthi akayona nje noma yimuphi umbulali nokuthi mhlawumbe umbulali obulalayo.
Le mpikiswano iba namandla lapho bethola ezinye izidumbu zabesifazane ezinobufakazi obufanayo.. Iqala kanjalo-ke imfuno yokulwa nesikhathi sombulali omnyama oqondayo.
Ukuhlaziywa Umdanso wama-tulips
Umdanso wama-tulips (2019) kuyajabulisa isethwe ikakhulu kumasipala waseGernika womphakathi waseBasque. Ibhuku inezahluko ezingama-79 ezimfushane, Ezinye zazo zikhona kubikwe kumuntu wesithathu ngumbalisi owazi konke, futhi abanye ngokokuqala ngomunye wabalingiswa endabeni.
Abalingiswa abaphambili -amalungu amane ophiko locwaningo— zichazwe kahle kakhulu, zinezindaba eziqinile, ezihambayo nezihehayo, ezingaphunyuki eqinisweni lamanje. Laba ngabantu abanama-nuances namasiko ahlukile, abathi zizoguquka kancane kancane njengoba icebo liqhubeka.
Phakathi kwabalingiswa kugqamisa u-Ane Cesteno, otshelwa impilo yakhe yonke. Ndawonye naye, uJulia namanye ama-ejenti balungisa kahle icebo. Ukulandisa kuka-Ibon kuholela ekutheni umfundi abe yingxenye yezimpilo zabo, aze afike ezingeni lokubathanda njengokubazonda.
Ngaphezu kwesihloko esikhulu sophenyo, kwethulwa ezinye izihloko. Enye yezinto ezifanele kakhulu udlame lobulili ehlobene ngqo ne- ukugembula. Bayabonakala futhi ukuhlukunyezwa kwamaphoyisa nenkohlakalo, ukuhlukunyezwa, ukuhlukunyezwa nokuhlukumezeka komndeni.
Okuhlangenwe nakho okutholwe ngumlobi ngohambo lwakhe kufakazelwa ngokwanele kuwo wonke umlando. UMartín uchaza ngokuningiliziwe indawo ngayinye ese-Urdaibai; umphumela ulula futhi muhle ngasikhathi sinye, kangangoba ngokufunda akunzima ukucabanga ngezindawo zeGernika noma iMundaka; izimpophoma nezinye izindawo.
Imvelo eyindida —Kwenziwe kwaba yimbubhiso esabekayo echazwe ekuqaleni kwencwadi— kugcinwa kulayini ngamunye kuyo yonke le ndaba. Isinqumo sicacisiwe ukwehla ngethonsi, okugcina umfundi enentshisekelo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Umdanso wama-tulips inezinga lokwamukelwa eliphakeme kakhulu kuwebhu: ngaphezu kwabafundi abangama-85% bayithandile le ncwadi. Ku-Amazon kuphela, umsebenzi unezilinganiso ezingaphezu kwezingu-1.100, ezinamaphuzu aphelele ayi-4,4 / 5. Izinkanyezi ezi-5 zivelele, ngama-57%; ngenkathi izilinganiso ezingaphansi kwezinkanyezi ezi-3 zimbalwa, kuphela u-10%.
Abathandi bokungabaza bazojabula ngalesi sitolimende. Kungumsebenzi osheshayo, omusha, ojabulisayo, onesigqi esinempilo nesiphetho esimangazayo. Ngaphandle kokungabaza, enye indlela enhle kakhulu yabathandi bezithokozi.
Olunye ulwazi mayelana nomlobi: Ibon Martín Álvarez
Intatheli nomlobi waseGipuzkoan u-Ibon Martín Álvarez wazalwa ngo-1976 edolobheni laseSan Sebastián (Izwe laseBasque), eduze nomngcele waseFrance. Ufunde ezokuxhumana nezobuntatheli e-University of the Basque Country. Ngemuva kokuphothula iziqu zakhe, wasebenza iminyaka eminingana emithonjeni yezindaba ehlukahlukene yasendaweni, umsebenzi awahlanganisa nenye yezinto ayezithanda kakhulu: ukuhamba.
Uhamba ngezwe laseBasque
Impilo yakhe yaguqukela phansi lapho ethatha isinqumo sokulandela elinye lamaphupho akhe, ahambele izindawo nezindawo zeBasque Country. Icebo lakhe kwakungukuhamba amakhulu emizila esifundeni esinomlando e-Euskal Herria, kokubili izindawo zabavakashi nezindawo zasemakhaya. Ukufinyelela isifiso sakhe kwamenza wafaka izincwadi, waqala ukubhala izincwadi ngokuhamba kwakhe nohambo lwakhe emphakathini waseSpain.
Ngalezi ziqondisi, Inhloso enkulu yombhali kube ukukhuthaza ukuvakashelwa kwezindawo ezinamandla amakhulu okuvakasha, kepha okungaziwa kangako. Uyizuze ngendlela elula: wenze izincomo ezahlukahlukene ngokuya ngokuhlola kwakhe emphakathini waseBasque. Eziningi zalezi zincwadi kungenzeka sibonga ukwesekwa ngu-vlvaro Muñoz.
Ngo 2013, wethule inoveli yakhe yokuqala, owawubiza ngokuthi Isigodi esingenagama; umlando omayelana nomuzi wakubo. Ngenxa yokwamukelwa okuhle kwale ncwadi yokuqala, ngemuva konyaka washicilela i-saga yama-Nordic thrillers shayela Ubugebengu bendlu yesibani (2014). Lolu chungechunge luqukethe imisebenzi emine: Indlu Yokukhanya Yokuthula (2014), IShadow Factory (2015), I-Akelarre Yokugcina (2016) futhi Ikheji Losawoti (2017).
Ngemuva kokuphumelela kwesaga —Lokho kulandisa ngezigigaba zomlobi uLeire Altuna-, ezishicilelwe Umdanso wama-tulips (2019). Ngale noveli yokusola, umbhali waseBasque ukwazile ukuzibeka phakathi kwabahloli bezinhlobo ezihamba phambili zalolu hlobo, ngenxa yokuzibandakanya okukubangele enanini elikhulu labafundi. Ngo 2021, kwaqhubeka okuvusa usinga, ne isethulo se inoveli yakhe yakamuva: Isikhathi sezinyoni zasolwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Umdanso wama-tulips
Usuku okwalahleka ngalo uthando